अगामी चुनावमा लोसपाको क्लिन स्वीप हुन्छ – Sahara Times
कार्यकारिणी सदस्य, एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको छ । पार्टी विभाजनका लागि २० प्रतिशत भन्दा बढी सांसद लिएर निर्वाचन आयोगमा महन्थ ठाकुरले निवेदन दिनुभएको थियो । भदौं ९ गते सनाखत भयो । सनाखत पछि महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको मान्यता पाउनुभयो । भदौं २२ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सनाखत भइसकेको छ । २०७७ बैशाख १० गते तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएर जसपा नेपाल बनेको थियो । तर एकीकरण भएको एक वर्ष नबित्दै पार्टीमा विवाद सुरु भएको थियो । सोही विवादका कारण जसपा नेपाल विभाजन भयो । प्रस्तुत छ, जसपा नेपाल विभाजनको दोषी को ? विभाजनले कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा, अगामी यात्रालगायतका विषयमा सहारा टाइम्सले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री इस्तियाक राइसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
बडो मेहनतले एक भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अन्ततः विभाजन नै भयो, यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
–नेपालको राजनीतिकका लागि कुनै पनि दल विभाजन हुनु भनेको दुखद कुरा हो । कसैले चाहदैन कि कुनै पनि दल विभाजन होस् । दल विभाजन हुनु भनेको एउटा परिवार विभाजन जस्तै हो । यसमा सबैलाई उस्तै पीडा हुन्छ । एउटै कोखबाट जन्मेका दाजु भाइको बीचमा भागबण्डा हुँदा जसरी एउटा पीडा भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै दल विभाजनमा पनि हुन्छ । दल वा पार्टी पनि एउटा परिवार जस्तै हो । सबै नेताहरु एउटा परिवारका सदस्य भएर काम गरिरेहका हुन्छन् । एकै ठाउँमा मिलेर काम गरिरहेको अवस्थामा विभाजन हुँदा मलाई मात्र होइन, धेरैलाई पीडा हुन्छ । त्यसैले दल विभाजन राम्रो होइन ।
तपाईले भन्नुभयो, दल विभाजन राम्रो होइन, तर यो भयो कसरी ?
–हेर्नुस् मान्छेले कतिपय कुरा चाहदा नचाहदै भइरहेका हुन्छन् । एउटै आमा बुवाबाट जन्मेका भाइहरुको बीचमा भागबण्डा हुन्छ । यो प्रकृतिको नियम विपरित नै हो । भाइ भाइबीच अलग हुनुपर्छ भनि कसैले सोचेका हुँदैनन् । तर परस्थिति यस्तो निर्माण हुन्छ कि बाध्य भएर अलग हुनुपर्छ । जसपा नेपालमा पनि त्यस्तै भयो । हामीले पार्टी विभाजन नहोस् भनि चाहँदा चाहदै पनि विभाजन भयो । यो दुखद कुरा हो । कतिपय साथीलाई अलग भएर नै राम्रो गर्न सकिन्छ भनि लागेर अलग हुनुभएको होला । अरु कुनै बाध्यता पनि होला अलग हुनुभयो ।
यो विभाजनले तपाईहरुलाई फाइदा भएको छ कि बेफाइदा ?
–पार्टी विभाजनले कसैलाई फाइदा हुँदैन । बेफाइदा नै हुन्छ । पार्टी फुट्नु हुँदैन्थ्यो तर केही नेताको हठका कारण विभाजन भयो, जुन दुखद पक्ष हो । जसपा विभाजन हुँदा कसैलाई फाइदा वा वेफाइदा भएको छैन, मधेसलाई घाटा भएको छ । मधेस जनताले यसको घाटा महसुस गरिरहेको छ । मधेस जनता यसबाट निकै दुखि छन् । पार्टीमा दुईचार सीट यता वा उता हुनसक्छ तर विभाजनले नराम्रो सन्देश गएको छ । तर यसले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई कुनै असर परेको छैन । किनभने उहाँहरु पार्टी विभाजनमा महारथी प्राप्त गर्नुभएको छ । यसअघि पनि फोरम विभाजन हुँदा महन्थ र राजेन्द्रहरुको हात थियो । उहाँहरुले प्लानिङ गरेर पार्टी विभाजन गर्नुभएको थियो । जुन काम उहाँहरुले अहिले पनि गरिरहनु भएको छ । त्यसैले जसपा विभाजनले मधेशलाई असर गरेको छ । किनभने महन्थ र राजेन्द्र महतोहरुले मधेशको मुद्दा, अधिकार र पहिचानमाथि कुठाराघात गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाउनु भएको छ । केपी शर्मा अ‍ोलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन कदम चाल्नु भएको थियो, त्यसमा उहाँहरुले पनि साथ दिनुभएको थियो । अहिले आएर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभयो । सुरुमा नै देउवालाई समर्थन गरेको भए आज देशमा यो अवस्था आउने थिएन तर महन्थ र राजेन्द्रका कारण देशमा यो अवस्था आएको हो, त्यसैले उहाँहरुको क्रियाकलापले गर्दा जनतालाई वेफाइदा भएको छ ।
उहाँहरुले त उपेन्द्र यादवको हठका कारण जसपा विभाजन भएको भन्नुहुन्छ नि ?
–जसपा विभाजन गरेर लोसपा (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल) उहाँहरुले गठन गर्नुभयो अनि दोष हामीलाई दिएर हुन्छ ? हामीले पार्टीको आधिकारिता पाएपनि उहाँहरुलाई पार्टीबाट कारवाही गरिएको थिएन । उहाँहरु सुध्रिएर आउनु हुन्छ भनि हामीलाई लागेको थियो । हामीले सार्वजनिक रुपमा पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेका थियौं तर उहाँहरु गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्किनु कता हो कता तराई मधेसमा अभियान चलाउन थाल्नुभयो । जसपामै रहेर जसपाका अध्यक्षको विरोधमा भण्डाफोर कार्यक्रम चलाउन थाल्नुभयो । तैपनि हामीले केही गरेनौं, सुध्रिएर आउला भनेर लागेको थियो अन्ततः उहाँहरु पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो । उहाँहरु गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुभयो तैपनि हामीले पार्टी विभाजन नहोस् भनि चाहेर उहाँहरुलाई सुध्रिने मौका दियौं तर सुध्रिनु भएन ।
पार्टीको आधिकारिताका लागि सुरुमै उपेन्द्र यादवले नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभयो त्यो पार्टी विभाजन थिएन ?
–होइन, त्यो पार्टी विभाजन होइन । पार्टीमा ठिक ढंगले काम गर्न दिनु भएन, विधि र पद्धती अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न दिनु भएन भन्दै पार्टी सञ्चालनका लागि हामीले आधिकारिता माग गरिएका थियौं । उहाँहरु पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने, बैठक बोलाउँदा बैठकमा नआइ दिने, पार्टीको बहुमतबाट हुने निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने जस्ता कारणले आफूहरु पार्टीको आधिकारिता माग गरेका थियौं र निर्वाचन आयोगले हामीलाई आधिकारिता दिएको थियो ।
अधिकारिता पाउने वित्तिकै महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाउनु भयो नि होइन ?
–हामीले हटाएको होइन, निर्वाचन आयोगमा उहाँहरुले विपक्षमा मतदान गरेपछि जसपामा रहनु भएन भनि पुष्टि भएको हो । जसपाको आधिकारिताका लागि भएको हेडकाउन्टमा उहाँहरुले उपेन्द्र यादवको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो अर्थात जसपाको आधिकारिताको पक्षमा उहाँहरु हुनुहुन्न भनि पुष्टि भएको हो । त्यसैले उहाँहरु कार्यकारिणी समितिमा रहनु भएको छैन भनि स्पष्ट गरेको मात्र हो । उहाँहरुले विपक्षमा मतदान गरेर आफ्नो कित्ता आफै क्लियर गर्नुभएको थियो ।
जसपाबाट उहाँहरु निस्किदा कति प्रतिशत कार्यकर्ता तथा नेता लिएर निस्किनु भएको हो, कति प्रतिशत तपाईहरुका लािग छाडिएका छन् ?
–प्रतिशतकै कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत प्रतिनिधि हाम्रो पक्षमा छन् । प्रदेशमा पनि हामीसँग ७५ प्रतिशत छन् भने उहाँहरुले २५–३० प्रीतशतमा चित्त बुझाउनु भएको छ । संघमा हामीसँग ६० प्रतिशत रहेको छ भने उहाँहरुसँग ४० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । र फेरि पनि भन्छु, प्रतिशत वा सँख्या कुनै ठूलो कुरा होइन । संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीता मुख्य कुरा हो । त्यसमा को प्रतिवद्ध छन्, को बेइमानी गरिरहेका छन् त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । फेरिपनि संसदीय राजनीतिमा सँख्याको पनि ठूलो महत्व हुन्छ ।
लोसपा भन्दा जसपा कहाँ कहाँ बलियो छ ?
–लोसपाभन्दा हामी सबै ठाउँमा बलियो नै छौ । उनीहरुको सात प्रदेश शुन्य छ, लुम्बनी प्रदेश शुन्य छ, एक नम्बर प्रदेश शुन्य छ । प्रदेश २ मा अलि अलि उहाँहरुको पनि छन् । तर जसपालाई टप्न सकेको छैन । जसपाभन्दा लोसपा धेरै पछाडी छ । त्यसको कल्पना नै गर्न सकिदैन । अब जसपा र लोसपाबीच कुनै तुलना नै गर्न सकिदैन ।
मधेसमा त जसपा र लोसपाकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ होइन ?
–हेर्नुहोला यसपालीको चुनावमा लोसपाको क्लिन स्वीप नै हुन्छ । चुनावमा पनि यो पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहन्छ, सँगसँगै चुनावमा जाने कुराकानी भइरहेको छ । त्यस अवस्थामा लोसपा धेरै पछाडी पर्छ । लोसपासँग कुनै प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन । हुनसक्छ, चुनावमा प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको बीचमा पनि गठबन्धन होस् । चुनावमा एउटा अग्रगमनकारी गठबन्धन हुन्छ भने अर्को प्रतिगमनकारी गबन्धन हुन्छ । प्रतिगमनकारी शक्तितिर लोसपा जाने सम्भावना बढी छ ।
यसको हिसाब हेर्दा त विभाजनले तपाईहरुलाई फाइदा नै भएको जस्तो लाग्छ होइन ?
–यसलाई फाइदा भनिदैन । सँख्या ठूलो कुरा होइन, मुद्दा ठूलो कुरा हो । लोसपाले मुद्दा समाप्त गरेको छ । प्रतिगमनलाई साथ दिएको छ । संसद जस्तो गरिमामय संस्थालाई विघटनमा सहयोग पुर्याएको छ । यसले गर्दा मैले अघि पनि भनेको थिए कि सँख्या कुनै ठूलो कुरा होइन, मुद्दा ठूलो कुरा हो । लोसपासँग अब कुनै मुद्दा नै बाँकी छैन । अब कुन मुद्दा लिएर जनताको बीचमा जाने उहाँहरुको बीचमा अन्योल देखिन्छ ।
राजेन्द्र महतोले त ठाउँ ठाउँमा भन्दै आउनु भएको छ कि यसपटकको चुनावमा जसपासँग कुनै गठबन्धन हुनेछैन यसमा तपाईहरुको धारणा के छ ?
–सबभन्दा पहिला राजेन्द्र महतोले यो कुरा क्लियर गरोस् न कि चुनाव कहाँबाट लड्नु हुन्छ अनि मात्र कोसँग मोर्चा बनाउने वा नबनाउने कुरा गर्दा ठिक हुन्छ । आजसम्म उहाँ विना मोर्चा वा गठबन्धनले चुनाव जित्नु भएको इतिहास छ, छैन नि । त्यही मान्छेले भन्दै हुनुहुन्छ कि चुनावमा जसपासँग कुनै गठबन्धन हुँदैन । म त्यस्तो कुरा भन्दिन । अरु कसैले पनि त्यस्तो भन्न मिल्दैन । राजेन्द्र महतोलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेको छैन भने उहाँले व्यक्तिगत रुपमा त्यसलाई मिलाउन पर्छ नकि पार्टीमा त्यसलाई ल्याउनुपर्छ । चुनाव हो, त्यसमा जित हार हुन्छ । जितका लागि गठबन्धन वा चुनावी तालमेल भइरहेका हुन्छन् । उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होला । पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । हामी कुनै पनि मोर्चा वा गठबन्धनको विरोधमा छैनौं । कुनै पनि अग्रगमनकारी शक्तिसँग हामी गठबन्धन गर्न सक्छौ ।
Tags: #istiyakrae, #JSPNEPAL, #loktantriksamajbadipati
लोसपाले असोज ३ गतेलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने